Mpamatsy Pharmaceuticals Global - Global Medicals®
Manorata E-Mail Aminay [email voaaro]
Manoratra / Login
Momba ny GM®
Raha tsy manana kaonty manokana ianao dia midira
Ampiasao ny mailakao hidirana
Raha manana kaonty manokana ianao dia midira azafady
Ampiasao ny mailakao amin'ny fisoratana anarana
Manana entana 0 ao anaty saretynao ianao
GLOBAL MEDICALS® Mpamatsy Global Pharmaceuticals. Pharmaceuticals
Global Medicals®: Mpamatsy Pharmaceuticals ambongadiny
Ny fivarotana fanafody ambongadiny dia orinasa lehibe ahitana mpivarotra ambongadiny malaza sy azo antoka. Misy karazana vokatra fanafody ambongadiny maro amidinay amin'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao ao anatin'izany ny vokatra fikarakarana hoditra, levitra toy ny opioids, diaper fanariana, antibiotika ary fitaovam-pitsaboana hafa. Ny vidin'ireo vokatra ireo dia miovaova arakaraka ny habetsaky ny baiko, ny toerana fandefasana ary ny satan'ny mpanjifa.
Manolotra serivisy fifampidinihana an-tserasera ihany koa izahay izay mifantoka amin'ny vokatra sy serivisy atolotray ary ny fomba mety hanampiana anao bebe kokoa. Ny fividianana vokatra fanafody an-tserasera amin'ny fivarotana tsy fantatra dia mitondra risika satria mahalana ianao no mahazo antoka ny kalitaon'ny vokatra azonao. Eto amin'ny Global Medicals®, ny vokatra fanafody Grade A ihany no karakarainay, tsy misy fanelingelenana sy fanitsakitsahana. Manome toro-hevitra sy toro-hevitra maimaim-poana ho an'ny mpanjifanay izahay momba ny fomba hahitana tsara kokoa ny mpamatsy ambongadiny tsara sy ny fomba hividianana an-tserasera mba hahazoana antoka fa mahazo izay nasainao.
Ny vokatra pharmaceutique ambony indrindra dia azo amidy amin'ny antsinjarany sy ambongadiny.
Ny Global Medicals® dia manome serivisy fakan-kevitra ara-pitsaboana maimaimpoana ho an'ny mpanjifa ankehitriny sy ho avy.
Manome tolotra ara-pitsaboana tsy manam-paharoa izahay, izay tena tiana sy tadiavina.
Mahazoa vaovao farany momba ny fitsaboana sy ny maro hafa avy amin'ny bilaoginay, miaraka amin'ny fanamafisana ny vokatra sy ny kojakoja fanafody.
Nosoratan'i - Milton Ford
Ahoana ny fihetsiky ny indostrian'ny fanafody amin'ny 2021 amin'ny teknolojia vaovao?
Amin'ny taona 2021, ny indostrian'ny pharmaceutika dia ho toerana hafa amin'ny fomba ankehitriny. Ahoana ny
Ahoana no hividianana amin'ny fivarotam-panafody eo an-toerana
Na aiza na aiza misy anao any Etazonia, dia azo inoana fa hanana izany ianao
Tombontsoa azo avy amin'ny fanafody opioid
Mety halaim-panahy ho anao na ny olon-tianao ny manolotra opioids amin'ny fitsaboana fanaintainana maharitra. SAINGY
Mahazoa vaovao farany momba ny vokatra fanafody, tolotra ambongadiny ary bonus rehefa misoratra anarana ianao.
Raiso amin ny Ankehitriny
Global Medicals® dia mpitarika maneran-tany amin'ny varotra sy fizarana vokatra fanafody ambongadiny, kojakoja ara-pitsaboana ary serivisy ara-pitsaboana.
Fanafody tsy mifoka
Rating na fitokisana
Copyright © 2021 Global Medicals®. Zo rehetra voatokana.